Shiinaha oo Hogaaminaya Waddada Dhaqaalaha Cagaaran ee Caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Shiinaha oo Hogaaminaya Waddada Dhaqaalaha Cagaaran ee Caalamiga ah
Horraantii Oktoobar, Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF, marka loo eego muuqaalkiisa dhaqaalaha adduunka, wuxuu hoos u dhigay saadaasha kobaca caalamiga ah ee 2021 ilaa 5.9 boqolkiiba wuxuuna ka digay hubanti la'aanta sare ee soo kabashada dhaqaalaha.
Dhanka dib-u-dhacan oo kale, hoggaamiyeyaasha 20-ka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa Sabtidii isugu soo baxay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga iyagoo isku dayaya in ay mar kale ka dhigaan madal dhinacyo badan leh - si la mid ah sidii ay yeelaysay markii ay qabteen laba shir-madaxeed sannadkii wixii ka dambeeyay burburkii maaliyadeed ee caalamiga ahaa ee 2008.
Shiinaha, oo ah mishiinka kobaca muhiimka ah ee dhaqaalaha adduunka, ayaa iftiimiyay iskaashiga, loo dhan yahay iyo horumarka cagaaran ee shirka 16-aad ee kooxda 20 (G20) ee hoggaamiyeyaasha.
Iskaashi ka dhan ah masiibada
Maaddaama COVID-19 uu wali dunida baabi’inayo, iskaashiga tallaalka caalamiga ah waxaa mudnaan siiyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping markii uu khudbaddiisa ka jeedinayay muuqaal muuqaal ah fadhigii ugu horreeyay ee shirwaynaha.
Waxa uu soo jeediyay lix dhibcood oo Tallaalka Caalamiga ah ee Tallaalka Tallaalka oo diiradda lagu saaray iskaashiga R&D ee tallaalka, qaybinta caddaaladda ah ee tallaallada, ka tanaasulidda xuquuqda hantida maskaxda ee tallaallada COVID-19, ka ganacsiga tallaalka oo siman, aqoonsiga tallaallada iyo taageerada maaliyadeed ee iskaashiga tallaalka caalamiga ah. .
Sinnaan la'aanta qaybinta tallaalka ayaa ah mid caan ah, iyadoo waddamada dakhligoodu hooseeyo ay helayaan wax ka yar 0.5 boqolkiiba wadarta guud ee adduunka iyo in ka yar 5 boqolkiiba dadka Afrika ayaa si buuxda loo tallaalay, sida ay sheegtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO).
WHO waxa ay dejisay laba bartilmaameed oo lagula tacaalayo masiibada: in la tallaalo ugu yaraan 40 boqolkiiba dadweynaha adduunka dhammaadka sanadkan lana kordhiyo ilaa 70 boqolkiiba badhtamaha 2022.
"Shiinuhu wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan dhinacyada si loo kordhiyo helitaanka iyo awood-u-helidda tallaallada ee waddamada soo koraya oo ay gacan ka geystaan ​​​​dhisidda khadka difaaca tallaalka caalamiga ah," ayuu yidhi Xi.
Shiinaha ayaa ilaa maanta bixiyay in ka badan 1.6 bilyan oo qiyaasood oo tallaal ah in ka badan 100 waddan iyo hay'ado caalami ah. Wadar ahaan, Shiinuhu wuxuu bixin doonaa in ka badan 2 bilyan oo qiyaasood adduunka sanadka oo dhan, ayuu raaciyay, isagoo xusay in Shiinuhu uu samaynayo wax soo saar tallaal oo wadajir ah 16 waddan.
Dhisidda dhaqaalaha adduunka furfuran
Isagoo kor u qaadaya soo kabashada dhaqaalaha, madaxweynuhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in G20 ay tahay inay mudnaanta koowaad siiyaan horumarinta isku-duwidda siyaasadda, isaga oo ku baaqay in horumarka caalamiga ah laga dhigo mid sinnaan, wax ku ool ah iyo mid loo dhan yahay si loo hubiyo in waddanna aanu ka hari doonin.
"Dhaqaalaha horumaray waa in uu fuliyaa ballan-qaadkooda ku aaddan kaalmada horumarineed ee rasmiga ah oo ay dhaqaale badan u fidiyaan dalalka soo koraya," ayuu yiri Xi.
Waxa uu sidoo kale soo dhaweeyay ka qaybgalka firfircoon ee wadamo badan oo ka mid ah Hindisaha Horumarinta Caalamiga ah.
Muddo yar ka hor, wuxuu soo jeediyay Hindisaha Horumarinta Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay wuxuuna ugu baaqay beesha caalamka inay xoojiyaan iskaashiga dhinacyada yareynta faqriga, sugnaanta cuntada, wax ka qabashada COVID-19 iyo tallaalada, maalgelinta horumarinta, isbedelka cimilada iyo horumarinta cagaaran, warshadaynta. dhaqaalaha dhijitaalka ah iyo isku xidhka.
Hindisaha ayaa si heer sare ah ula jaan qaadaya yoolka G20 iyo mudnaanta horumarinta caalamiga ah, ayuu yidhi Xi.
U hoggaansanaanta horumarka cagaaran
Dhanka kale, wax ka qabashada isbeddelka cimilada ayaa ah mid ka mid ah ajandayaasha caalamiga ah iyadoo kalfadhiga 26-aad ee Shirweynaha Xisbiyada (COP26) ee Axdiga Qaabdhismeedka Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada uu Axadda ka furmayo Glasgow, Scotland.
Xaaladdan oo kale, Xi ayaa ku boorriyay waddamada horumaray inay tusaale u noqdaan dhimista qiiqa hawada, isagoo sheegay in dalalku ay si buuxda u waafajiyaan dhibaatooyinka gaarka ah iyo welwelka dalalka soo koraya, oo ay ka dhabeeyaan ballan-qaadkooda ku aaddan maalgelinta cimilada, ayna u fidiyaan teknolojiyad, karti-dhis iyo taageero kale wadamada soo koraya.
"Tani waxay si aad ah muhiim ugu tahay guusha COP26 ee soo socota," ayuu yidhi.
Xi ayaa, marar badan, iftiimiyay aragtida Shiinaha ee maamulka cimilada adduunka, wuxuuna muujiyay taageerada adag ee Shiinaha ee heshiiska Paris, fududaynta horumarka ballaaran ee heer caalami.
Sannadkii 2015-kii, Xi ayaa khudbad muhiim ah ka jeediyay shirka Paris ee isbeddelka cimilada, isaga oo gacan taariikhi ah ka geystay gebagebada heshiiskii Paris ee ku aaddan ficillada cimilada adduunka kaddib 2020.
Horaantii bishan, waxa uu carabka ku adkeeyay dadaalka lagu doonayo in lagu gaaro heerka ugu sarreeya ee kaarboonka iyo bartilmaameedyada dhexdhexaadnimada ee Shiinaha markii uu ka hadlayay shir madaxeedka hoggaamiyeyaasha ee shirkii 15-aad ee Shirweynaha Xisbiyada ee Axdiga Kala duwanaanta noolaha.
Shir madaxeedka G20 ayaa sanadkan lagu qabtay khadka tooska ah iyo khadka tooska ah ee Madaxtooyada Talyaaniga, iyadoo diiradda lagu saarayo caqabadaha ugu daran ee caalamka, iyadoo ajandaha ugu sarreeya arrimaha la xiriira cudurka faafa ee COVID-19, isbeddelka cimilada iyo soo kabashada dhaqaalaha.
Waxaa la sameeyay 1999-kii, G20 oo ka kooban 19 waddan oo lagu daray Midowga Yurub, waa madasha ugu weyn ee iskaashiga caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha.
Kooxdu waxay ku dhowdahay saddex-meelood laba meelood dadka adduunka, in ka badan 80 boqolkiiba wax soo saarka gudaha ee caalamiga ah iyo 75 boqolkiiba ganacsiga caalamiga ah.